भिडियोमा हेर्नुहोस्, विदेशीलाई नेपालमै काम लगाउने युवा, विदेशीले काम नगरे जरिवाना ! – osnepal tv
भिडियोमा हेर्नुहोस्, विदेशीलाई नेपालमै काम लगाउने युवा, विदेशीले काम नगरे जरिवाना !
डम्बर पुन पोखरामा संचालित ब्याक टू नेचर रिसोर्टका संचालक हुन् । डम्बरका दाजुभाई मिलेर आगन्तुकलाई प्रकृतिसँग साक्षात्कार गराउने उदेश्यले ब्याक टू नेचर रिसोर्ट खोलेका हुन् । ब्याक टू नेचरमा पुग्दा सुन्दर प्रकृतिको काखमै पुगेको अनुभव आगन्तुकले सुनाउने गरेको संचालक पुन बताउछन् ।
उनिहरुले अहिले विदेशीलाई स्वयमसेवक कामदारको रुपमा काम गराउने गरेका छन् । विदेशीहरु नेपालमा आएर प्रकृतिसँग मिलेर काम गर्न पाउँदा आँफैमा दंग छन् भने यसबाट डम्बरका दाजुभाई पनि निकै खुसी छन् । स्वयमसेवकको रुपमा काम गर्न पाहुनलाई खाना बस्न निशुल्क व्यवस्था गरिदिएका छन्, डम्बरका दाजुभाईले ।
अब भन्नुहोस्, विदेशीहरु नेपाल आएर घाँसदाउरा गरेको देख्नु भएको छ ? पक्कै पनि छैन होला । यति मात्रै हो र, उनीहरु कुटोकोदालो पनि चलाउँछन् र नेपालमा गाउँले जीवन बिताउँछन् । रहर र अनुभव बटुल्न भएपनि युरोपबाट कयौं विदेशी यतिबेला कास्कीको डाडाँखर्क पुगेका छन् । पोखरा लेकसाइडबाट झण्डै ९ किलोमीटर माथी छ ब्याक टू नेचर रिसोर्ट । जहाँ आएर विदेशीहरु घाँसदाउरा गर्छन् । गोबर सोहर्छन् ।
Previous article काठमान्डौमा भेटिए यस्तो अच्चमको केटा जोडी, बिहे गरेर छोरी समेत जन्मिन । सबै कुरा बताए
Next article ‘लथालिन्ग सरकार’ बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक
काठमान्डौमा भेटिए यस्तो अच्चमको केटा जोडी, बिहे गरेर छोरी समेत जन्मिन । सबै कुरा बताए